Abdihakim Olad – Garsoore Sports
RASMI: Garabka Arsenal Oo Amaah Hal Xilli-ciyaareed Ugu Biiray Feyenoord
Xiddiga garabka uga ciyaara Arsenal Reiss Nelson ayaa amaah hal xilli ciyaareed ah ugu biiray kooxda reer Holland ee Feyenoord kaddib markii ay soo afjareen xiisihii ay u qabeen xiddiga Man United Amad Diallo. Nelson,…
RASMI: Real Betis Oo Amaah Kula Wareegtay Hector Bellerin
Daafaca middig ee Arsenal Hector Bellerin ayaa amaah hal xilli ciyaareed ah ugu biiray kooxda ka dhisan La Liga ee Real Betis, sida ay kooxdu xaqiijisay. Halyeeyga Gunners, oo kooxda joogay muddo toban sano ah…
Chelsea Oo Atletico Kala Heshiisay Saxiixa Saul
Chelsea ayaa ogolaatay heshiis ay kula soo saxiixaneyso xiddiga qadka dhexe ee Atletico Madrid Saul Niguez oo ah amaah billow ah oo ay dheertahay ikhtiyaari ay toos ula saxiixan karto amaahda kaddib. Heshiiska ayaa lagu…
RASMI: Real Oo La Wareegtay Camavinga (Faahfaahin)
Real Madrid ayaa ku dhawaaqday inay la soo wareegtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Faransiiska Eduardo Camavinga kaas oo lagu soo waramayo inay ku iibsatay 30 milyan oo euro. Camavinga, oo 18 jir ah, ayaa ka…
RASMI: Daniel James Oo Ku Biiray Leeds United (Faahfaahin)
Leeds ayaa ku dhawaaqday inay la soo wareegtay Daniel James oo ay kala soo wareegtay Manchester United maalinta ugu dambeeysa ee suuqa kala-iibsiga xagaaga. James, oo 23 jir ah, ayaa tijaabada caafimaadka u maray Leeds…
Henderson Oo Heshiis Cusub U Saxeexay Reds
31 jirkaan ayaa raacay wadadii Van Dijk, Alisson, Robertson, Fabinho iyo Alexander-Arnold isagoo mustaqbalkiisa u hibeeyay kooxda Liverpool. Kabtanka kooxda Liverpool Jordan Henderson ayaa soo afjaray wararkii la isla dhexmarayay warbaahinta ee ku aadanaa mustaqbalkiisa…
Rasmi: Da’yarkii City Oo Ku Biiray Granada
Kooxda Granada ayaa xaqiijisay saxiixa da’yarkii kooxda Manchester City Alpha Dionku kaasoo qalinka ugu duugay heshiis 4 sanno ah. 19 jirkan dambeedka middig ee reer Senegal ayaa xilli-cayaareedkan amaah ku qaadanaya kooxda Heerka 2aad ee…
Barca iyo Atletico Oo Is Dhaafsanaya Griezmaan-Felix
Sida laga soo xigtay Mundo Deportivo, Barcelona ayaa isku dayday xilli dambe si ay Antoine Griezmann ku beddelato Joao Felix. Kooxda reer Catalan ayaa isku dayaysay inay mushaarka weyn ee xiddiga reer France ka saarto…
Barca Oo Ku Dhow Saxiixa Edinson Cavani
Xiddiga Man Utd ayaa u muuqda inuu u jewi beddelanayo garoonka Camp Nou Barcelona ayaa qarka u saaran saxiixa weeraryahanka Manchester United Edinson Cavani, sida ay ku waramayaan wararkii ugu dambeeyay. Wadahadaladii u dhaxeeyay labada…
Wolves Oo Ku Dhow Saxiixa Renato Sanches
Kooxda kubbada-cagta Wolves ayaa ku dhow inay heshiis amaah ah kula soo wareegto xiddiga qadka dhexe ee Lille Renato Sanches, sida laga soo xigtay Talksport. 24 jirkaan ayaa ku guuldareystay inuu isku muujiyo horyaalka Premier…